သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ဂွမ်းစောင်များကိုသဘောင်္ဆေးထိုးအပ် -> ဂွမ်းစောင်များကိုသဘောင်္အပ်
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan ဂွမ်းစောင်များကိုသဘောင်္အပ် ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
Equivalent Systems: SY8160
မျက်စိ၏အလယ်, 180 °ထောင့်ချိုးမှာ Shanks အကြောင်းစတင် Cone-shaped အချက်များနှင့်အတူဆေးထိုးအပ်ကြောင့်တစ်ခုချင်းစီချုပ်များ၏အရည်အသွေးဆုံးဖြတ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောပိုးအဖြစ်အလွန်ချောထည်ချုပ်များအတွက်။ ဒါဟာအပ်ချုပ် bedsheets, bedquilts နှင့် bedspreads များအတွက်သင့်လျော်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တခြားနှင့်ညီမျှစနစ်များကိုမထားဘူး။
Size: 18/110 ~ 21/130
Equivalent Systems: 2044 (Paff), 1564 (Simplicity Pattern ကို)
အဆိုပါဝိသေသ: အဆိုပါအပ်နဖားကိုပွိုင့်သာပုံမှန်လှည့်လည်ပွိုင့်ဖြစ်သည့် R ကိုအမှတ်နှင့်တကွ, အပ်နဖားကိုအမှတ်ဘုံအထည်အလိပ်ပစ္စည်းများနှင့်သိုးမွှေးထိုးသည့်ပစ္စည်းများသင့်လျော်သည်။ ဖြောင့်ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်စံပဝါနဲ့အတူအပ်နဖားကိုတစ်ထောင့် 180 °မှာ Shanks ကတစ်ခုချင်းစီချုပ်များ၏အရည်အသွေးဆုံးဖြတ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောပိုးအဖြစ်အလွန်ချောထည်ချုပ်များအတွက်။ ဒါဟာအပ်ချုပ်အိပ်ရာခင်းများ, အိပ်ရာဂွမ်းစောင်များကိုသဘောင်္နှင့် bedspreads များအတွက်သင့်လျော်ပါတယ်။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 2044; 1564 ။
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> စက်ကို ဂွမ်းစောင်များကိုသဘောင်္ဆေးထိုးအပ် : EBX1，EBX3
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ဂွမ်းစောင်များကိုသဘောင်္အပ် : SY8160，SY8168
နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ဂွမ်းစောင်များကိုသဘောင်္စက်အပ်နဖားကို : 135X9 MR